Ny fametrahana ny fametrahana ny orinasa mpamokatra sy ny mpandraharaha - Ny orinasa Shina - Cixi Wenap International Trading Co., Ltd
Home > Products > Fiarovan-tena sy fanakam-basy > Fananganana fananganana fanorenana > Manamboatra Fipoahana
Product Introduction of Corner Fixing Buildings
Ny fononteny Metal L dia mamorona tranokely matanjaka na minimalista. Ny fonosana tsirairay dia naparitaka amin'ny tanana ao amin'ny orinasa metaly misy ny tsipiriany amin'ny antsipiriany izay tsy ho hitanao na aiza na aiza. Mivoy ny zorony isika ary tsy misy metaly eto, mampiasa ny vy eo an-toerana, ary mifantoka amin'ny fahamendrehan'ny fitongilanana - satria izany no toerana misy ny tanjany! Ary fantatsika fa tsy misy olona te-handidy manodidina ny fiadian-karena mba ahafahantsika mampiditra bolina ilaina amin'ny lamina tsirairay ho an'ny fametrahana haingana sy mora. Ahitana singa ONE (lamosina boribory) misy loko vita amin'ny tanana (1 "lehibe ary 1/4" matevina) miaraka amin'ny lavaka matevina eo amin'ny rindrina sy ny fanohanana. Ny habeny dia manondro ny halalin'ny tabilao. Ny fonosana tsirairay dia misy 6 & quot; tongotra izay mitsambikina eo amin'ny rindrina ary afaka mihazona ny 75lbs isaky ny tsirairay. Raha te hanome baiko, dia fidio ny habetsaky ny fonosana arakaraka ny halalin'ny talanao. Manoro hevitra izahay fa ny 2/4 amin'ny halavan'ny takelaky ny latabatra dia fara-fahakeliny.
Product Parameter amin'ny trano fametrahana trano
Ny fangatahan'ny mpanjifa
Karbon vy, Stainless Steel
Vita amin'ny varahina na varahina
Trano fanaka hazo
Karazan-tsakafo sy fampiharana ny trano fametrahana trano
Ao anatin'andriam-baravarana sy fanoratana, ary indraindray dia lazaina hoe hazo fisaka, ny takelaka fifampikasohana dia singa fototra mifototra izay mihazona eo anelanelan'ny hazo hazo. Ireo connecteurs toy ny Metal C ny fonosana dia manana anjara toerana iray izay ahafahan'ny mpikambana roa toy ny post sy beam mifampiankina amin'ny laminy. Ny L Bracket dia mitazona ny mambra sy ny toerany hanohanana ny fanorenana ankapobeny.
fampiharana:Trano fanaka hazo
Fanazavana momba ny trano fametrahana trano fonenana
Packaging Details:Metaly vy metaly mampifandray ny fiarovan-tongotra / angom-pahefana ho an'ny hazo: Kitapo mangatsiatsiaka; Kitendry ordinatera hafa, na araka ny fepetra takian'ny mpanjifa.
Hot Tags: Ny fanorenana trano fonenana, China, mpamokatra, mpamatsy, orinasa, vita avy any China, Wholesale, Buy, Customized, An-tsompitra, Mpiasa, Price, Vidy, Teny fohy, High Quality